TOKO 12: FAMERENANA PARAMETRIKA - Geofumadas
Rehefa mampiasa teboka fiafarana snap, na afovoany ohatra isika, ny tena ataontsika dia manery ny zavatra vaovao hizara teboka amin'ny haibolony amin'ny zavatra iray hafa efa voasintona. Raha mampiasa referansa "Parallel" na "Perpendicular" isika, dia zavatra mitovy no hitranga, dia terenay ny fandaminana geometrika ny zavatra vaovao raha oharina amin'ny iray hafa, ka raha tsy mifanindran-dàlana na maharitra, arakaraka ny tranga sy ankoatry ny safidy hafa, dia tsy afaka mamorona io zavatra vaovao io noforonina.
Ny "Parametric Constraints" dia azo jerena ho toy ny fanitarana ilay hevitra mitovy izay manentana ny firesahana ireo zavatra. Ny maha samy hafa azy dia ny filaharana geometrika efa napetraka dia mijanona ho takiana fa ny zavatra vaovao dia tokony hihaona maharitra, na ny tena izy, ho fameperana.
Noho izany, raha mametraka tsipika ho laharam-pahamehana amin'ny hafa isika, dia tsy maninona na oviana na oviana hanova ny andalana hafa, ny zavatra mitrosa dia tsy maintsy mijanona ho laharam-pahamehana.
Mazava ho azy, ny fanaovana fampiharana ny fameperana dikany rehefa manova zavatra. Izany hoe, tsy misy fameperana afaka manao fiovana ho any amin'ny sary, nefa misy, azo atao fiovana dia voafetra. Raha tiantsika ny hifandray amin'ny AutoCAD efa misy zavatra iray izay tsy mitaky fiovana, dia tsy misy dikany efa tanteraka tamin'ny parametric sary toy izany famerana. Raha toa, amin'ny lafiny iray hafa, dia manao sary ny trano na ampahany milina izay mbola nijery shape're farany, dia parametric faneren'ny dia manampy, satria Manampy antsika koa ho raikitra hitahiry ireo zavatra eo amin'ny fifandraisana, na ny dimensions, ny famolavolana tsy maintsy hihaona.
Manamboara fomba hafa: fifandimbiasan-tsoratra voafaritra tsara dia fitaovana goavana ho an'ny asa fanorenana, satria mamela antsika hanamboatra ireo singa izay tsy maintsy hajanona ny fifandraisany na ny fifandraisana amin'ny geometrika.
Misy karazana fepetra roa voafaritra: Geometry and Dimension. Ny voalohany voalaza faneren'ny ny zavatra voafaritra (perpendicular, mifanitsy, mitsangana, sns), raha ny amin'ny lafiny faneren'ny nametraka lafiny (lavitra, sy ny lafiny manokana radii amin'ny zava-dehibe). Ohatra, ny tsipika dia tokony ho 100 foana na tsipika roa dia tokony hamaritra ny mari-pahaizana 47 ° degre. Kosa, nafatotra faneren'ny azo aseho toy ny equations, ka ny farany lafiny iray dia mifototra amin'ny zavatra ny soatoavina (miova na tsy tapaka) ny mira dia ahitana.
Koa satria isika dia mianatra ny fanovana fitaovana ny zavatra avy amin'ny toko faha-16, jereo eto ny fomba hamoronana, fijery sy hitantana parametric faneren'ny, fa aoka ihany hisy hiverina ho azy ireo amin 'izany toko.
Previous Post«Previous CHAPITRE 11: TRAVELING POLARINA
Next Post Fepetran'ny geometrika 12.1manaraka »